Benefits Of Dry Fruits | Hamro Patro
जङ्क फुड र फास्ट फुड तर्फ अहिले अधिकांश मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गर्दा स्वस्थ र पोषणयुक्त खानेकुरा धेरैले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । मानिसहरूको बदलिदो जीवनशैली अनि बढ्दो व्यस्तताको कारण सन्तुलित भोजनको सुविधा जता त्यतै उपलब्ध नहुँदा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू पूरा गर्न ड्राइ फ्रुट्स उत्तम विकल्प हो । ड्राइ फ्रुट्सहरू नियमित सेवन गर्दा यसले शरीरलाई चुस्त र स्फूर्त राख्नका साथै अन्य धेरै फाइदाहरू पुर्याउँछ ।
रातभरि पानीमा भिजाएर बिहान त्यो ड्राइ फ्रुट्स खाँदा अत्याधिक लाभदायिक हुने गर्दछ । त्यसबाहेक, धेरै तौल भएका मानिसहरूले डाइटिङ गर्दा र गर्भवती महिलाहरूको लागि पनि ड्राइ फ्रुट्स लाभदायिक मानिन्छ ।
यसरी अनेक फाइदा भएका ड्राइ फ्रुट्सहरू नियमित सेवन गर्दा यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ। तर, ड्राइ फ्रुट्सलाई धेरै मात्रामा सेवन गर्नु भने उचित मानिदैन । दैनिक रुपमा प्रति प्रकारका ४ देखि ७ वटा ड्राइ फ्रुट्स सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि उत्कृष्ट हुने गर्दछ । त्यसभन्दा धेरै मात्रामा ड्राइ फ्रुट्स खाँदा ग्यास्टिक,कब्जियत, तौल बढ्ने, दातमा कीरा लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्छन् ।
केही ड्राइ फ्रुट्स र त्यसका फाइदाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ
१. ओखर : ओमेगा-३ पाइने ओखर दिमागको विकासको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । हामीले ओखरलाई फोरेर हेर्यौँ भने पनि यसको आकृति मानव मस्तिष्क जस्तै देखिन्छ । यसर्थ मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्नको लागि ओखरको सेवन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
२. काजु : काजुमा आइरन र जिंक पाइन्छ । विशेष गरेर काजुले शरीरमा कोलेस्टेरोल र मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ ।
३. बदाम : मोटोपन, कोलेस्टेरोल तथा मधुमेह नियन्त्रण गर्ने बदाममा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन प्रशस्त मात्रमा पाइन्छ । रगतमा हेमोग्लोबिन मात्रा बढाउने बदामलाई निकै लाभदायक मानिन्छ ।
४. किसमिस: रक्तसञ्चार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने किसमिसमा भिटामिन-ए, पोटासियम, आइरन पाइन्छ ।दाँतको रोगबाट बच्न उपयोगि हुने किसमिसले आँखालाई ताजा राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
५. पिस्ता : धेरै गुणहरु भएको पिस्ताको अत्याधिक सेवनले भने गर्मी गराउने गर्दछ । यसर्थ, यसको सेवन सन्तुलन मिलाएर मात्र गर्नु पर्छ । भिटामिन ई पाइने पिस्ताले छालाको क्यान्सर तथा मधुमेह नियन्त्रण गर्दछ ।
स्वदेशमा बस्ने आफ्नो प्रियजनलाई हाम्रो गिफ्ट्स मार्फत ड्राइ फ्रुट्स पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।